Fanabeazana fahadiovana - ewa.mg
News - Fanabeazana fahadiovana
Misy ny fampiofanana ireo tompon’andraikitry ny haino aman-jery eto Analamanga mikasika ny fanajana ireo toetra fototra amin’ny fanadiovana sy fidiovana. Tanjona ny fanovam-pihetsika amin’ ny fidiovana sy fanadiovana, araka ny fampahafantarana nataon’ny fikambanana Wateraid. Haharitra efatra andro ny fampiofanana izay hifarana rahampitso.
L’article Fanabeazana fahadiovana est apparu en premier sur AoRaha.
« Indraindray koa vehivavy »: 25 taona nanoratana i Rado Ramaherison
Hetsika iray ahitana famoahana boky sy antsan-tononkalo ny hanamarihan’i Rado Ramaherison ny faha-25 taona nanoratany. Hivoaka amin’io 20 avrily, manomboka amin’ny 2 ora sy 52mn, ao amin’ny CGM Analakely, io ny boky « Ranontany », 129 takila, maneho manontolo ny hoe « Indraindray koa vehivavy i Rado Ramaherison ». Nomarihiny fa manomboka eto ny boky rehetra havoakany, ho « Ranontany » avokoa, saingy eo amin’ny fikarohana, tsy maintsy avahina amin’ny hoe « Ranontany 1 », « Ranontany 2 »…Fantatra fa boky fahefatra taorian’ny « Ronjom-bazo » niarahany amin’i Avelo-Nidor, ny taona 2002, sy ny « Fanalahidy » niarahana tamin’i Lanto Tsiory, ny taona 2004, ary ny « Ranontany », nivoaka ny taona 2009 (asasoratr’i Rado Ramaherison irery) nanamarihana ny 15 taona nanoratany, ity boky havoaka rahampitso ity. Efa nahazo ny loka voalohany tamin’ny fifaninanana nokarakarain’ny Association Mikajy momba ny ankizy sy ny herisetra tamin’ny alalan’ny lahatsoratra fanadihadiana i Rado Ramaherison.HaRy Razafindrakoto L’article « Indraindray koa vehivavy »: 25 taona nanoratana i Rado Ramaherison a été récupéré chez Newsmada.
Natolotra ny Fampanoavana afak’omaly ny olona fito voarohirohy tamina raharaha halatra kojakojana fiara tsy mataho-dalana iray, teny Masindray Avaradrano, izay nitranga tamin’ny zoma lasa teo. Voatazona am-ponja vonjimaika ny roa amin’izy ireo. Noafahana vonjimaika kosa ny dimy ambiny. L’article Halatra fiara est apparu en premier sur AoRaha.
Hajia Papa François
Manomboka anio ny fanaparitahana an’ireo hajia manokana misy ny sarin’i Papa François novokarin’ny Paositra Malagasy. Mahatratra an-tapitrisany ny hajia natonta ho mariky ny fandalovan’ity Ray Masina sady Filohan’ny fiangonana Katolika ity eto Madagasikara. Hamidy amin’ny vidiny 1 000 ariary ny hajia. L’article Hajia Papa François est apparu en premier sur AoRaha.